သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - Outilsdecuisine.com
ဆောငျးပါး 1 - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်း
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်အပေါ်တစ်ဦးဝယ်ယူစေသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောသင့်အမည်, လိပ်စာနှင့် e-mail လိပ်စာအဖြစ်, သင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းပါ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏စတိုးဆိုင် browse အခါ, ငါတို့သည်လည်းအလိုအလျှောက်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်သုံးတဲ့ browser နဲ့ operating system ကိုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာ, လက်ခံရရှိသည်။
အီးမေးလ်ဖြင့်စျေးကွက် (ရှိလျှင်): သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့စတိုးဆိုင်အသစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားမွမ်းမံမှုများနှင့် ပတ်သက်. သင်အီးမေးလ်များပေးပို့လိမ့်မည်။
ဆောငျးပါး2- သဘောတူညီခကျြ
သငျသညျ, တစ်ဦးငွေပေးငွေယူဖြည့်စွက်သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်စစ်ဆေးတစ်ခုအမိန့်ကိုနေရာတစ်ခုပေးပို့အချိန်စာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဝယ်ယူပြန်လာရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ပေးသည့်အခါငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင့်အချက်အလက်များကိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့ရန်အသုံးပြုစုဆောင်းသဘောတူယူဆ ကြောင်းရည်ရွယ်ချက်သာ။
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, အခြားမည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်မေးလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုတိုက်ရိုက် express ကိုသဘောတူညီခကျြကိုမေးပါလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့ငြင်းဆန်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနှင့်ငါတို့သည်အသင်တို့ကိုဆက်သွယ်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းသို့မဟုတ်ပါကထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါသဘောမတူဘူး, သင် outilsdecuisine@gmail.com မှမေးလ်သို့မဟုတ်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားစေခြင်းငှါ အကယ်. : Outilsdecuisine.com 22 Rue Neuve, VERNOU ON BRENNE, 37210, ပြင်သစ်
ဆောငျးပါး3- ဖော်ထုတ်ခြင်း
ဆောငျးပါး4- Shopify
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင် Shopify Inc ကိုပေါ်တည်ခင်းဧည်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာပလက်ဖောင်းက e-Commerce ငါတို့န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့ခွင့်ပြုကျွန်တော်တို့ကိုပေး။
ဒေတာကိုဒေတာသိုလှောင်မှုစနစ်နှင့် Shopify databases ကိုနှင့် Shopify ၏အထွေထွေလျှောက်လွှာထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဒေတာ firewall ကိုဖြင့်ကာကွယ်ထားလုံခြုံတဲ့ဆာဗာတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
သင်တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ငွေပေးချေဂိတ်ဝေးမှတဆင့်သင်၏ဝယ်ယူမှုစေလျှင်, ဤအမှု၌ Shopify သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထား။ ဤအချက်အလက်စက်မှုလုပ်ငန်းငွေပေးချေမှုကဒ် (PCI-DSS) ကစတင်တည်ထောင်သည့်ဒေတာလုံခြုံရေးအတွက်၏စံအရသိရသည် encrypted ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဝယ်ယူမှုငွေပေးငွေယူနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များသည်သင်၏အမိန့်ဖြည့်စွက်ဖို့နေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်လိုအပ်သောထားရှိမည်နေကြသည်။ သင့်ရဲ့အမိန့်အပြီးသတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ဝယ်ယူငွေပေးငွေယူနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များအားဖျက်ပစ်နေကြသည်။
အားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ငွေပေးချေ gateway များထိုကဲ့သို့သောဗီဇာ, မာစတာကတ်, အမေရိကန် Express နှင့် Discover အဖြစ်ကုမ္ပဏီများပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကနေရရှိလာတဲ့, PCI လုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်းများ၏ဘုတ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲ PCI-DSS နှင့်အတူလိုက်လျော။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ Shopify ၏ကဒီမှာဒီမှာသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကြည့်ရှုပါ။
ဆောငျးပါး5- third party ဆောင်ရွက်သောဝန်ဆောင်မှုများ
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့အသုံးပြု Third-party ပံ့ပိုးပေးသာသူတို့ပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းသုံးပါနဲ့ထုတ်ဖော်လိမ့်မယ်။
သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောငွေပေးချေမှု gateway များနှင့်ငွေပေးချေအရောင်းအတခြားပရိုဆက်ဆာကဲ့သို့အချို့တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုပေး, ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝယ်ယူအရောင်းအဘို့အပေးရန်လိုအပ်သည်သောသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများရှိသည်။
ဤအပေးသွင်းနှင့်စပ်လျဉ်းငါတို့သည်သင်တို့သူတို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပြုမူဆက်ဆံပုံကိုနားလည်နိုင်အောင်သင်ကဂရုတစိုက်သူတို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒများကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
သငျသညျကနေဒါတည်ရှိသည်နှင့်သင့်ငွေပေးငွေယူသတင်းအချက်အလက်များသည်အရောင်းအဝယ်ဖြည့်စွက်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြရသောသငျသညျပိုငျဆိုငျ, United States မှာတည်ရှိပါတယ်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်များကလုပ်ငန်းများ၌လျှင်ဥပမာအားဖြင့်, ၏ဥပဒေများအောက်တွင်ထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါ အဆိုပါ Patriot ဒုံးအက်ဥပဒေအပါအဝင်အမေရိကန်, ။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site ပေါ်တွင်အခြို့သောလင့်များအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုစွန့်ခွာချင်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကတခြားဆိုဒ်များအားဖြင့် privacy ကိုအလေ့အကျင့်များအတွက်တာဝန်အဘယ်သူမျှမယူဆနဲ့သင်သည်သူတို့၏ကိုယ်ရေးမူဝါဒများကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
ဆောငျးပါး6- လုံခြုံမှု
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျနော်တို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ယူ. သူတို့က, ဆုံးရှုံးခဲ့ရအလွဲသုံးစား, ဝင်ရောက်ကြသည်မဟုတ်သေချာစေရန်ဖို့အကောင်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်ကိုလိုက်နာ, ပြောင်းလဲသို့မဟုတ်လျြောဖျက်ဆီးထုတ်ဖော်။
သငျသညျပေးလျှင်သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက် SSL ကိုလုံခြုံရေး protocol ၏အသုံးပြုမှုကိုမှတဆင့် encrypted နဲ့ AES encryption ကိုအမျိုးအစား-256 နှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်ကိုကျော်ဂီယာ၏နည်းလမ်းသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်သိုလှောင်မှု% 100 မှလုံခြုံပေမဲ့ကျနော်တို့ PCI-DSS အပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကလက်ခံခဲ့သည်နောက်ထပ်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖေါ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့ cookies တွေကိုစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့ခွင့်ပြုပါသို့မဟုတ်မရှိမရှိရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့အတှကျကျနော်တို့ကဒီမှာသူတို့ကိုစာရင်းပြုစုထားပါတယ်။
_session_id, ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသား session ကိုသင့်ရဲ့ session တစ်ခု (referrer တို့ရဲ့, ဆင်းသက်စာမျက်နှာ, etc) အကြောင်းကို Shopify စတိုးဆိုင်သတင်းအချက်အလက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
_shopify_visit မျှအခွန်ရှောင်ဒေတာ, နောက်ဆုံးခရီးစဉ်ကိုကတည်းက 30 မိနစ်ဆက်ရှိနေသေး။ လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်ရောင်းချသူစာရင်းဇယားများ၏ပြည်တွင်းရေးစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
_shopify_uniq မျှအခွန်ရှောင်ဒေတာ, နောက်နေ့ (ထိုဧည့်သည်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်. ) သန်းခေါင်မှာကုန်ဆုံး။ စတိုးဆိုင်ကတစ်ခုတည်းဖောက်သည်မှလာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်ကိုတွက်ချက်။
လှည်း, ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသား2ရက်သတ္တပတ်, သင့်စျေးဝယ်လှည်းနှင့်စပ်လျဉ်းစတိုးဆိုင်များတွင်သတင်းအချက်အလက်ဆက်ရှိနေသေး။
_secure_session_id, ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသား session တစ်ခု
စတိုးဆိုင်စကားဝှက်တစ်ခုရှိပါတယ်လျှင် undefined storefront_digest, ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားကလက်ရှိဧည့်သည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလျှင်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုသည်။
ဆောငျးပါး7- သဘောတူညီခကျြအသက်
ဒီ site ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်နေထိုင်ရာသင့်ရဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အများစု၏အနည်းဆုံးအသက်ဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုမည်သူမဆိုဤအသုံးပြုရန်သင်၏တာဝန် underage ခွင့်ပြုပါရန်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီကြောင်းကိုယ်စားပြု က်ဘ်ဆိုက်။
ဆောငျးပါး 8 - ဒီနည်းကိုကိုယ်ရေးမူဝါဒကိုပြောင်းလဲ
သငျသညျလိုပါက: access ကို, မှန်ကန်သော, ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက်ရှိသည်, တစ်ဦးတိုင်ကြားချက်, သို့မဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာပိုမိုသောအချက်အလက်များချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဂျင့် privacy ကိုစံချိန်စံညွှန်း gmail က @ outilsdecuisine ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Outilsdecuisine.com မှ com သို့မဟုတ် mail ဖြင့်
[22 Rue Neuve, VERNOU BRENNE ON, F, 37210, ပြင်သစ်]